Shirkado ka diiwaangashan xafiiska deyn ururinta oo la dhaleeceeyay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Bluffaktura Foto Claudio Bresciani/TT
Shirkado ka diiwaangashan xafiiska deyn ururinta oo la dhaleeceeyay
La daabacay fredag 14 november 2014 kl 14.00
Shirkado badan oo ka tirsan xafiiska qaabilsan ururinta daynta ayaa loo soo jeediyay eedo la xidhiidha in ay codsiyo la xidhiidha qaan deyn u direen dhalinyaro da’doodu ka hoosayso 18-jir middaas oo sharciga aan waafaqsanayn.
Sidaa waxaa xaqiijinaysa hey’adda dawlada u qaabilsan in ay dhowrista sharciyada iyo macluumaadka gaar ahaaneed ee loo yaqaan Datainspektionen. Hey’adda oo dabagal ku samaysay toban shirkadood, tobankaas oo siddeed ka mid ahi ay jabiyeen sharciga.
Arrinka ayaa waxaa sababay in aanay shirkaduhu ogeyn in ay sharci daro tahay in dhalinyarada da’doodu ka hoosayso 18-jir in loo diro codsi daymeed. Sidoo kale shirkadahan ayaa ka dhaadan aqoonta sharciga sidaa ay sheegtay hey’addan dawlada u qaabilsan dhowrista sharciyada iyo macluumaadka gaar ah.